महिला फुटबल: नेपालले भारतलाई जित्न सक्ने पाँच आधार – Page 2019 – दाङ खबर
महिला फुटबल: नेपालले भारतलाई जित्न सक्ने पाँच आधार
काठमाडाै‌ँ चैत ७ । दक्षिण एसियाली महिला फुटबल च्याम्पियनशिपमा नेपाल र भारतबिच चौथो पटक उपाधिका लागि भिडन्त हुँदैछ।
विराटनगरको शहीद मैदानमा शुक्रवार हुने फाइनल खेल अगाडि दुवै टोलीका प्रशिक्षकहरूले जित्ने दाबी गरेका छन्। भारतीय प्रशिक्षक मायामोल रक्कीले भनिन् – हरेक प्रतिस्पर्धा नयाँ हो र हामी विगत वा इतिहासमा विश्वास गर्दैनौँ।
प्रतियोगिताको पाँचवटै संस्करणमा भारतसँग पराजित भएको नेपाल पनि इतिहास बिर्सन चाहन्छ। बरु पहिलो पटक नयाँ इतिहास कोर्ने आत्मविश्वासका साथ मैदानमा उत्रिने तयारीमा नेपाल देखिएको छ।
प्रशिक्षक हरि खड्का भन्छन् – “हामी अहिले यस्तो अवस्थामा छौं। जहाँ खुलेर भन्न सक्छौँ की परिस्थिति इतिहास विपरीत हुनेछ। नेपाली टोली जितको लक्ष्य लिएर मैदानमा उत्रिन सक्षम छ। त्यो नयाँ इतिहास भोलि लेखिनेछ।”
विहीवार दुवै टोलीका सदस्य एवं अधिकारीहरूले रमाइलो गरि होली मनाए पनि शुक्रवार भने दुवै टोली एकअर्कालाई हराउने दाउमा देखिन्छन्। नेपाल र भारत दुवै राष्ट्रसँग खेलेर प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेको बांग्लादेशी टोलीका प्रशिक्षकले पहिलो पटक नेपाललाई भारत भन्दा बलियो प्रतिद्वन्द्वी भनि चित्रण गरे।
विश्लेषकहरु भन्छन् अझै पनि भारतलाई जित्नु नेपालको लागि कठीन परीक्षा हुनेछ। तर उनीहरू भन्छन् – चुनौती पार गर्ने केही ठोस आधारहरू नेपाली पक्षमा छ।
के के छन् त्यस्ता आधारहरु ?
सन्तुलन: नेपाली टोलीलाई सन्तुलित मानिएको छ। भुटानसँग खेलिएको पहिलो खेलदेखि सेमिफाइनलमा श्रीलंकालाई हराउँदासम्म खेलाडीहरूले एकपछि अर्को खेलमा सुधारिएको प्रदर्शन गरेका छन्।
भरपर्दा खेलाडी : साम्वा उपनामले चिनिएकी स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारी र कप्तान निरु थापाको आक्रामक जोडी रहेको अग्रपंक्ति विपक्षीलाई हावाकावा खेलाउन सक्षम छ। गोलका सुन्दर अवसरहरू सृजना गर्न सक्षम मिडफिल्डर अनिता बस्नेत र रेनुका नगरकोटेको जोडी पनि प्रभावकारी देखिएको छ।
आत्मविश्वास: प्रशिक्षक हरि खड्काका अनुसार पहिलोपटक महिला खेलाडीहरूमा आत्मविश्वास चुलिएको छ। भारत बलियो छ भन्ने ‘मनोवैज्ञानिक डर’ हटेको छ। दुई महिनाको बिचमा भएको दुईवटा भेटमध्ये ओलिम्पिक छनोटमा १-१ गोलको बराबरी तथा भारतमा भएको चार देश सम्मिलित हिरो कपमा पाएको २-१ को विजयले पनि उनीहरूमा हौसला थपेको छ।
घरेलु दर्शक: विराटनगरको शहीद मैदानमा आशा गरिए झैँ फाइनलमा ओइरिने नेपाली समर्थकहरूको साथ र ‘हुटिङ’ नेपालको थप शक्ति बन्ने विश्वास गरिएको छ। कप्तान निरु थापाले त्यसको लागि दर्शकसँग आग्रह गरिसकेकी छन्।
प्रतिद्वन्द्वी: ठीक विपरीत नेपाल सजिलो प्रतिद्वन्द्वी रहेन भन्ने छाप भारतीय खेलाडीहरूमा परेको छ। जसको फाइदा नेपाललाई पुग्नेछ। उनीहरूको टोलीमा विगतमा चलेका केही नाम अहिले छैनन्। भारतीय कप्तान आशालता देवीले नेपाल बलियो टोली भएको स्वीकार्दै त्यसको सम्मान गर्ने बताइसकेकी छन्।
नेपाली खेलाडीका पाँच कमजोरी चाहिँ के होलान् ?
कमजोर रक्षापंक्ति: दायाँ रक्षा क्षेत्र नेपालको सबैभन्दा कमजोर पक्ष मानिएको छ। उक्त क्षेत्रबाट खेल्ने भारतीय ‘वींगर’ सञ्जु निकै तेज गतिकी भएकाले दायाँ रक्षा क्षेत्रमा ध्यान दिनु पर्ने देखिएको छ।
विचलनको डर: लामो समयसम्म पनि अग्रता लिन नसके खेलको स्वाभाविक एकाग्रता गुमाउने नेपाली खेलाडीहरूको बानी घातक हुन सक्ने चिन्ता छ। श्रीलंका सँगको सेमिफाइनलमा ४२ मिनेटसम्म गोल नहुँदा झण्डै त्यस्तै स्थिति उत्पन्न भएको थियो।
अनुभवको कमी: भारतको दाँजोमा नेपाली टोली अनुभवी हुँदै होइन। टोलीमा युवा खेलाडीहरूको बाहुल्यता छ। बढी दबाब झेल्ने वा अग्रतालाई कायम राखिराख्ने विषयमा अनुभव नपुग्दा केही न केही समस्या पर्न सक्ने जोखिम कायम छ। जस्तै सेमिफाइनलमा विपक्षीको कडा निगरानीमा परेकी सावित्रा भण्डारीले त्यो जालो तोड्न सकेको देखिएन।
अपरीक्षित: प्रतियोगिताभरि एक गोल पनि नखाएको नेपालको रक्षापंक्ति र गोलकिपरको प्रतिभाको वास्तविक परीक्षा हुन बाँकी नै छ। सेमिफाइनलमा विपक्षीले गरेको एउटा ‘काउन्टर एट्याक’ डरलाग्दो थियो। जसलाई नेपाली रक्षकले मुस्किलले रोके।
शारीरिक अवस्था: भारतको दाँजोमा नेपाल यसमा केही कमजोर देखिन्छ। भारतका उत्कृष्ट देखिएका स्ट्राइकरहरूको आक्रमण निस्तेज पार्न नेपाली खेलाडीहरूको गति निकै सुध्रिनुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले शुक्रवारको फाइनल प्रतिस्पर्धालाई कतिपयले निकै रोचक रूपमा सम्पन्न हुने विश्वास गरिरहेका छन्।
प्रशिक्षक हरि खड्काले विपक्षीलाई बलियो आकलन गर्दै भनेका छन्- “भन्नैपर्दा भारत हरेक क्षेत्रमा नेपालभन्दा माथि छ। नेपालले जितको लागि मेहनत नै गर्ने हो र गोर्खे बहादुरीको जुन गाथा छ त्यसलाई दोहोर्‍याउनै पर्छ। मलाई विश्वास छ नेपाली खेलाडीहरू त्यसका लागि सक्षम छन्।”
Prevबहिनीलाई अबिर नदल्न आग्रह गर्दा कुटिएका दाजुकाे अवस्था गम्भिर
Nextप्रदेश ५का सभामुख घर्ती अस्पताल भर्ना
जन्मदर्ता अभावमा जीवनको एसईई दिने इच्छा अधुरो शेरबहादुर थापा
तिहारपछि ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, तोलामा कति पुग्यो ?